HOHEY GAABISIDAA, MA GAAS BAAN LAGU SIIN????*Qormo Xiisa Leh Arrimaha Jubooyin iyo Gedo* | Saadaal Media	Tuesday, March 11th, 2014	Home
HOHEY GAABISIDAA, MA GAAS BAAN LAGU SIIN????*Qormo Xiisa Leh Arrimaha Jubooyin iyo Gedo*
Dec 2, 2012 - 7 Jawaabood	ShareCinwaakan sare wuxuu ka mid ahaa “Geeraar” uu Duuliye (AUN) G/Sare Xirsi Booddo xilli hore u tiriyey diyaarad uu dagaallo badan uga qayb qaatay waayo baaskii 1977/78 ka dhacayey Geeska Afrika. Waxaa weedhaas i xusuusiyey – shanqaro aan qaarkood habboonayn oo laga soo sheegayo Kooxo rag u badan oo asbuucyadaan bay Xamar shirar aan macne sii buuran lahayn makhaayadaha ku qabtaan la yiraadho. Qaarkood hawlo aanay shuqulba ku lahayn oo Hawlaha Maamul U Samaynta Jubbaland bay “Ha Lagaa Sheego” darteed media ku sheegga qaarkiis uga yabqaane; waxaan marna qaadan kari wayney, kuwa Jubbaland u dhashay ama la dhashay oo waqtiyada ku luminaya ama la luminaya ragga Kafantooda Tolaaya ee Shariif Sakiin, Xaabsade, Hebelka Dalxa, wiilkii Indhaha Cas cas ee aan Rabbiba u abuurin TV-ga ka sheeganayey iyo kuwa kale oo Jalalaqsi iyo Galgaduud in ay u dhasheen la sheego, iyagoo xilal iyo manaasib qaran sheeganaya – misna xiqdiga nacasnimo iyo xasdiga naaqusnimada ku jallaafaynaya Shaqada Ummadeed ee Jubbaland ka socota. Kuwaas dambe ee Reer Jubbaland ee Xamar-tii (Allaah ha u naxariistee) dugaaggu cunay la haysteyaasha ku ah, waxaan ku leenahay - Meerisyadii uu Sayid Maxamed Cabdille Xasan tan oo kale ka yiri: “Illayn doqoni calaf ma leh Dubaax maxaa ka baylahay; War Dalkaba idinkaa lehe Dawlad maad u noqotaan!!!”. Waxaanna ugu sii daraynnaa xadiith-kii oranayey: “Mu’minka isla hal god labo goor lagama wada qaniino” iyo Maahmaahdii Soomaaliga ahayd ee “Mar i gade Allaha dago; Bahdaana (beeshaada) haan qarroorkeed looguma taliyo“. Oo misna yaabka la arkay, odayaashu illowshiinyo dhawaa!!!. Nimanku sidee bay u hilmaameen – Teendhadii Dhagarta ee Carta oo iyagoo 18 Gobol ka ah 9 1/2, iyagoo Jamhuuriyaddii Soomaaliya 48-50% ka ah, oo haddii Soomaalida Gobollada Bariga Afrika degta lagu daro 70-75% ka ah; misna Hantidii Maguurtada ahayd ee Xamar qaran jabkii ka hor 54% gaarka u lahaa; uu qolka mugdiga ah Ina Cumar Geelle 2000kii 1/5 ama 4.5 waliba quursi leh u soo garraariyey; miyaa misna maanta sooryo quureed oo waliba sida loo badinayo sixir lagu qooshay, qabuurihii aabbeyaashood lagu qashay shirar qurmuun iyo guriyihii laga dhacay oo rag kale sheeganayo dushooda loogu qabanayaa!!.
Caku annaga’e, “Garba diiri marna Reer dagan ma weydo” miyaan ku jireynnaa???. Ragga maanta Shariif Sakiin arrimaha Maamul U Samaynta Jubbaland kala shirayaa, durba ma hilmaameen: Khudbaddii doqonnimo ee Jaalle Shaati Guduudkii SRRC uu Baydhabo ka aqriyey maalintii uu Madaxweynaha aan cidi u dooran isugu caleemo saaray Gobollada Koofur Galbeed ee uu Jubbaland oo dhan ku sheegay dhul Digil iyo Mirifle. Ma hilmaameen Subaxdii General Cali Maxamed Xasan Looyaan (Cali Madoobe) Taliyihii Guud ee Booliska Soomaaliya oo ciidan tababar Shiina ugu qaadaya 2008, ay lacagta “Baadda ah” in uu bixiyo ay qoryaha ugu soo gurteen Xaabsade, Kiish-Bur, Saransoor iyo cawaankoodu?. Oo maxaa nimankan budadooda buunshaha ku daray?. Wixii Soomaali kala dhexeeyey iyo wixii ay gaarka u tabcadeen boqollaalka sano meeye?. Bannaan idinkoo u jeeda, maxaa babacda idin saaraya?. Nin aan wax lahayni in uu waxaaga lugta ku walaaqo maxaa kugu jirrabaya?. Miyaan qaarkiinna u soo joogin ama aysan maqal ku soo gaarin – Shirqoolladii Dhagarta iyo Qabyaaladda ee (1) Beledweyne 1962 SNC (Somali National Congress) oo ay Maxamed Ibraahin Cigaal iyo Sheikh Cali Jamcaale maleegeen; (2) Wardhiigley 1972 Kulmiye iyo Jaamac Maxamed Qaalib wixii tidcayeen; (3) Jabbuuti June 27, 1977 ee Kulmiye iyo Xasan Guuleed Abtidoon oo uu Ina Cumar Geelle xoghaynta u ahaa; (4) Yaaqshiid 1986 Maxamed Sh. Cismaan iyo Liiqliiqato midkii ay isla guddoominayeen; (5) Dirirdhabe June 1989 Caydiid iyo Cabdiraxmaan Tuur oo maraggeedii halkan joogo; (6) Hotel Gurguurte (Xamar) April 1992 Go’aankii SNM Cismaan Kalluun, Saleebaan Gaal iyo madaxdii USC oo markhaatigii halkan joogo; (7) Jabbuuti June 1992, August 2000, January 2009 iyo (8) 33 shirar luggooyo (inta la og yahay) oo shirqoollo noocoodu liito lagu wada maleegayey. Dabcan, “Dhidar xabaalo qodaa, qurun buu ka dherga oo uuna aakhirkii u dhacaaye“, wixii ka dhashay wada aragnay. Dabcan qaarkiin badani waa uu ka dheregsan yahay (donqonta mooyee) – waxa ka dhacaya Eastligh Nairobi iyo Garrisa Nov. 18-22, 2012 meesha laga soo maleego iyo cidda u xil saaran oo Xamar, Nairobi iyo Dubai u kala joogta. Dagaalkii Yoontoy ee Nov. 26, 2012, in lagu laayey rag hadda Xamar laga soo diray oo Ciidanka Xoogga Dalka Beelaha Xamar lagu sheego ka tirsan oo kuwa noolna la qabtay, qaarkiin waa ay la socdaan. Xaggee bay soo mareen wiilashii Al-Shabaabka ee uu Sheikh Shariif Xabsiga Xamar ka soo daayey September oo hadda Kismaanyo 100 in ka badan lagu qab qabtay?. Markasta in Xamar waxkasta oo soomaaliya loogu talagalay la geeyo , oo in aad Baydhabo wax la wadaagto ay Shariif Sakiin iyo kuwo kale kuu shirsadaani – ma han yaraan bay kaa tahay (mayaba’e)?. Ma hoosaasinta yeela oo hooya oo ku go’a baa (yes)? Mise raggu sixir bay hambadeen oo Sakiin baa heeco rabbaysan oo haruub raaca taqaan iyo haatoy weeye ka weelay ????!!! Hebelliyo heblow, horta waa sidee?. Hawowaale iyo war hadoofa oo………….Hootada bel eeg hanaqaaga suran………..Haddu waa haddee……….. Beentiyo hungada, hoosaasintaa, heshiisyada qurmuun, halakada suntoo rag horow dhinteen, heesaha maldahan……………. Hugunka kala codkaa, hordhaciisa garo, hareeraha bal eeg, waxa digif hingilan…………Gobannimo higsoo………Habaaskana ka toos oo horay u soco, hadalkana yaree. Erayadan waxaan ka soo halka qaaday Maanso Boqol bayt ah oo aan soo daabacidoono dhawaan Allaah idanki.
Afeef:Maqaalada iyo Faalooyinka ku soo baxa Warbaahinta Saadaal waxay gaar u yihiin Qoraha ku saxiixan,sinaba ugama Turjumaan aragtida Saadaal
Fadlan Fikir kaaga Ha'ahaado Mid Bulshada Waxtar u leh Fikradaha Akhristayaasha (7)
ismail says:	December 2, 2012 at 4:41 am	NINKANI XIKMAD WAAQORAY YAASE OG DHUUXI KARTA DUN BUU UHADLAY BALSE DAD HUNGURI IYO SOOR QUUREED RAAC AH AYAA ARLADII WADA JOOGA
Reply »	Ikhlaas says:	December 2, 2012 at 5:21 am	Hadii hadal iyo xikmad wax tarayso waa loo sheegay reer qurac ee ha fakiraan aayahoodana ha ka tashtaan oo aysan hilmaamin laamigii karkarintii 1991 ee raxawayn samaysay war hooooooy baraaruga
Reply »	Indhergarad says:	December 2, 2012 at 5:51 am	Ikhlaas, yaa sababteeda lahaa “Karkarintii 1991″???
Ninka la yiraaho C/laah, “Caqligaaga” ayaad hadashay.
Reply »	Siyaad omar[siyad.octobar] says:	December 2, 2012 at 8:07 am	Wale dadow intd wax ogtihin yara war hoy inta afka laga hadlin maskaxda hashaqayso
Reply »	maskiinka says:	December 2, 2012 at 9:37 pm	Umad yahay waxan idinkula dardaarmaya marka hore ilah inaad ka cabsataan meel walba aad joogtaan,then aan isku duceeyno in ilaah Somali quluubtooda isku furto qabiilkana ka saaro ,sababto ah dhaman waxad ka dhawajiseen iyo qormada waxay ku saleysan tahay intaba waa waxii 21 sano dib ino dhigay
Reply »	qowdhan says:	December 3, 2012 at 6:33 pm	nacas yahow wariye isku sheega ah wax fiican soo qor ama iska aamus sharif xasan dhulka jubooyinka ilaa bay iyo bakoo gedo sh hoose isaga ayaa iska leh go,aanka isaga uu soo gaaro ayaa soconaya maxaad tari kartaa adiga loool
Reply »	ibrahiim says:	December 7, 2012 at 9:23 am	kkkkkkk war heedhe raxawey ma waxey rabaan inaan bakaarihi ka soo qufano war hor mey jogan waa la isyaqaanaaye sakiin naftiisuunacay haduu gado iyo kismanyo sheegtee mareexaan buusan aqoon mise 1991 buusan joogin wixi kadanbeeyey laf baan ku wasaeynaa raxaweyn iyo hawiyaba hadey ku hadlaan degaan keena